CNC Nanova Service - Anebon Metal Products Co., Ltd.
Inona no atao hoe CNC fiverenana?
CNC lathe dia avo-marina tsara, avo-fahombiazana milina mandeha ho azy fitaovana. Fitaovana amin'ny multi-toerana na ny hery turret turret, ny milina dia manana fitaovana isan-karazany ny fikarakarana ny teknolojia, dia mety fandraisana Linear cylinders, diagonal cylinders, arcs sy ny manahirana isan-karazany toy ny kofehy workpieces sy grooves, miaraka amin'ny Linear teny nasisika sy boribory teny nasisika.
Ao CNC fiovana, ny zavatra trano fisotroana dia natao tao amin'ny Chuck sy mihodina ny, ary ny fitaovana isan-karazany no nanome amin'ny lafiny, ary maro ny endriny fitaovana azo ampiasaina mba hamoronana ny endrika tiany. Rehefa manana ny foibe nihodina ka mihaohao miasa, dia afaka hanakana ny fihodinan'ny mba hamela nitotoana azy ny hafa ny endriny. Io dia mamela ny teknolojia ho an'ny isan-karazany ny endriny, ny habeny sy ny karazana ara-nofo.
Ny fitaovana ny CNC lathe foibe sy ny fiovana dia nitaingina teo amin'ny turret. Mampiasa ny CNC-maso miaraka amin'ny "tena-potoana" fitaovana (ohatra Pioneer Service), izay mijanona koa ny fihodinan'ny sy manampy asa hafa toy ny atsofony, grooves sy mihaohao faritra.
Raha toa ka mila fiovana CNC, isika dia iray amin'ireo tena mahavita sy competitively priced mpanamboatra. Amin'ny 14 karazana lathes nandroso mandeha ho azy, ny ekipa dia afaka mamokatra entana araka ny marina sy ara-potoana. Ny maro be ny famokarana fahaiza-manao mamela Anebon mba hanolotra tsy manam-paharoa santionan'ny faritra. Ny famokarana fitaovana faobe no miantoka ny manovaova sy ny fahatokiana. Ary dia hihaona ny ilain'ny orinasa rehetra manompo amin'ny fitsipika henjana tsara. Isika mifantoka amin'ny toetra sy ny mpanjifa.
CNC nitodika isika faritra mpanamboatra
Efa namoaka isan-karazany ny CNC faritra nitodika tamin'ny 10 taona sy ny injeniera foana ekipa nanome ny mpanjifa amin'ny vahaolana mahasoa mba hamahana ny olana eo amin'ny orinasa mpamokatra entana CNC fihodinana faritra. Antoka tsy tapaka isika machining avo lenta, na dia amin'ny raharaha sarotra amin'ny faritra, amin'ny fampiasana milina Modules sarotra sy mahay mampiasa CNC lathe mba miasa ny milina. Satria foana Anebon avo manodidina marina tsara!
MACHINING safidy eo CNC fihodinana
Izahay farany sy avo fitaovana fampisehoana ahitana ny CNC fihodinan'ny foibe sy 4-mpiray milina mihodina . Isika dia manolotra isan-karazany ny orinasa mpamokatra entana safidy. Na tsotra na sarotra niova faritra, lava na fohy lasa faritra fametrahana mazava tsara isika dia ampy fitaovana tsara ho an'ny ambaratonga rehetra ny fahasarotan'ny.
Nitranga fahiny machining / aotra andian-dahatsoratra famokarana
Production ny mpanelanelana amin'ny tontolo batch habe
Ireto manaraka ireto ireo fitaovana henjana fampiasa matetika: aluminium, Stainless vy, varahina sy nylon, vy, acetal, polycarbonate, acrylic, varahina, PTFE, titane, ABS, PVC, varahina etc.
Lasa fametrahana mazava tsara Components
Stainless Steel Lasa Parts
Varahina Motorcycle Parts
Mpanjifa avy any Alemaina Visit The Company F ...
Anebon Hardware Co., Ltd. nahazo ISO900 ...
Fametrahana mazava tsara sy matanjaka CNC Machine
aluminium fanariana, nanarato teny amin'ny faritra , aluminium maty fanariana , maty fanariana faritra , aluminium maty mandatsaka faritra , aluminium maty niampatra,